Lehilahy iray voasambotra tany Singapour noho ny fisandohana ho mpanao didy jadona Koreana Tavaratra somary tsara loatra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Lehilahy iray voasambotra tany Singapour noho ny fisandohana ho mpanao didy jadona Koreana Tavaratra somary tsara loatra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Hong Kong • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • Vaovao Mafana Singaporeana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny
Jona 8, 2018
Ny fitoviana tsy manam-paharoa nataon'i Kim Jong-un sy ilay mpanao didy jadona Koreana Tavaratra dia nahatonga ny fisamborana azy sy ny famotorana azy tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Changi any Singapour.
Ilay mpisandoka monina any Hong Kong, izay mandeha amin'ny anarana lampihazo Howard X, dia nandeha nankany Singapore mba hanana toetra talohan'ny fihaonana an-tampony teo amin'i Kim Jong-un sy ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump ny 12 jona.
Saingy toa azo inoana tokoa ny toetrany ka hitan'ny manampahefana Singapore fa ilaina ny manontany azy mandritra ny adiny roa, mba hahazoana antoka fa tsy izy no Kim tena mitady hiditra an-tsokosoko ao ambanin'ny radara.
"Nanontany ahy momba ny fomba fijeriko politika izy ireo ary raha nanao fihetsiketsehana na fikomiana tany amin'ny firenen-kafa aho," hoy i Howard X tamin'ny Bloomberg News. "Tsapako fa nanandrana nampitahotra ahy izy ireo, saingy raha noroahina aho dia vaovao be izany."
Navoaka ihany izy tamin'ny farany, saingy notenenina mazava tsara mba hanalavitra ireo toerana an-tampon'ny tampon'isa. Tsy fantatra na manakana ny drafitr'i Howard X, izay voatendry hiseho mandritra ny fihaonana an-tampony miaraka amin'i Dennis Alan, mpisandoka trompetra.
Tsy vao izao i Howard X sy Alan no niara-niasa. Mpankafy ankafizin'izy ireo izy ireo tamin'ny Lalao Olaimpika Pyeongchang tamin'ny volana febroary, niresaka sy nizara labiera vitsivitsy tamin'ireo vahoaka tsy dia nampoizina sy nampihomehy be.
Mikasika ny valin'ny fihaonambe ihany (ilay eo anelanelan'ny tena Trump sy ny tena Kim), Howard X dia be fanantenana kokoa noho ny olona hafa. "Heveriko fa hipetraka ireo mpitarika roa ary hanana fotoana mahafinaritra izy ireo, satria tena manana ny toetrany izy ireo," hoy izy tamin'ny volana lasa teo, araka ny nitan'ny Reuters. “Ho mpinamana be indrindra izy ireo aorian'io fivoriana io.”
Momba an'i Singapore
Singapore, fanjakana amina nosy iray atsimon'ny atsimon'i Malezia, ivon-toerana ara-bola manerantany miaraka amin'ny toetr'andro tropikaly sy mponina maro kolontsaina.